Thenga i-RAD140 powder online: Iifayili ze-8 kufanele wazi !!! | AASraw
/Blog/RAD140/Thenga i-RAD140 powder online: Iifayili ze-8 kufanele wazi !!!
ezaposwa ngomhla 02 / 06 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo RAD140.
|. I-RAD140 (i-Testolone) ebalulekileyo yepowder Characters:
Ngaphambi kwakho athenge i-RAD140 powder online, kufuneka ufunde le nqaku, uyazi ukuba yintoni i powder RAD140,ukuhlambuluka I-RAD140 powder, yintoni i-powder RAD140 esetyenzisiweyo? Indlela yokuthabatha i-RAD140 powder ngokuchanekileyo, kwaye ikuphi ukuthenga ubungcwele obuphezulu be-RAD140 powder.
Yintoni i-RAD 140 / Testolone?
RAD 140 yindlela yokukhetha i-androgen receptor (SARMs). Kuyafana kakhulu neyo-ostarine, LGD 4033, yaye S4 (andarine). Injongo yale mihlanganisi kukunika zonke iinzuzo zezempilo ze-anabolic steroids ngaphandle kweminye imiphumo echaphazelekayo. Ezi zithetha i-testolone ikhethayo ngokubophelela kwi-androgen receptors kwiisisipha ze-muscle kunye namathambo. Oku kukhuthaza umsebenzi we-anabolic kunye nokukhula.
Ucwaningo lwekliniki lubonisa ukuba lunako ukukhuthaza ukukhula kwemisipha kunye noncedo Ukulahlekelwa ngamatye. Ungabona kwakhona ukunyuka kwamandla emzimbeni, amandla okubambisana, ukunyamezela, kunye nokuhlala kakuhle. IiSARM ziyakwazi ukufumana iziphumo ezincinci ngenxa yobungakanani bazo kwiisisitye ezithambileyo abazibophelelayo kwiinkqubo zabo zeekhemikhali.
IiSARM (kubandakanywa ne-RAD 140) ziyi-steroidal ngokupheleleyo kunye nezikhethi ezikhethiweyo (imisipha kunye nethambo), njengoko sichazile ngaphambili. Oku kuthetha ukuba akufanele ukhathazeke ngeentliziyo okanye kwandiso lweprotate. Ukukhethwa kwezicubu ze-Testolone kukusindisa kulawo miphumo echaphazela impilo kunye nosengozini.
Yintoni i-RAD140 Powder?
I-RAD140 Powder, luhlobo lwe-crystal powder. Njengoko i-RAD140 i-RAD140, i-RAD140 ipow powder enye yokuthengiswa okutshisayo phakathi kwama-sarms, kungekhona nje ngenxa yeendleko ze-RAD140, kodwa kunye nokucocwa kwe-RAD140 eluhlaza, ewe, Ukuba ndithenga i-RAD140 i-powder eninzi, okanye i-labor use, ndikhetha ukuthenga i-RAD140 eluhlaza kwi-Intanethi, khetha i-RAD140 ethempelini yomthengisi kunye nokugcina uxhatano oluzinzileyo. Iinkcukacha ze-RADXNUMX inkcazelo ye powder eninzi AAS njenge:
I-RAD 140 Powder Work?
Kukho into eyaziwa ngokuthi yi-SARM leyo kwiminyaka embalwa edluleyo ibe ngumkhiqizo wokuzikhethela kubakhi beqela abazinikeleyo. Le yilapho i-RAD 140 powder ingenza umehluko omkhulu. Nangona kukho abantu abanokuzithemba abangenakho ngokuvisisana ngokupheleleyo nento enikezelayo, baninzi abanomzimba abayifumana isiluleko esinomdla kakhulu. Makhe sizame size sithole ukuba yintoni kanye ukuba sikwazi ukuba ingaba isebenza ngokwenene emhlabeni kwaye ihlangula kwisithembiso sayo. I-Rad 140 powder inemiphumo efanayo ne-Ostarine kunye ne-lgd-4033.
Okokuqala kwaye ngokuphambili kuyimveliso engabonakaliyo ngomlomo kwaye into engcono kakhulu nge-RAD 140 kukuba awunayo i-steroidal endalo. Ukuqhubela phambili, yenzelwe ngendlela enjalo eyenza ama-receptors e-hormonal kwiisisu zomzimba asebenze ngendlela efanayo nokufumana i-testosterone eyaneleyo. Ngenxa yoko ekupheleni kosuku, inceda kunye nomphumo wokugqibela wokugqibela. Oku kufana nebhayisikili kunye neprohormones kunye ne-anabolic steroids. Nangona kunjalo, into efanelekileyo kukuba kufikeleleka kwintlawulo engongeziweyo yemiphumo emibi. Oku kukuthatha inkulu enkulu ukuya ku-RAD 140.
Ngaba i-RAD 140 Powder Safe For Woman?
Njengamanye ama-SARMS, i-testolone inendlela yokukhetha, eyenza ukuba ibe nemiphumo ye-anabolic ngaphandle kweempembelelo eziqhelekileyo zibonwa nge-anabolic androgenic steroids (AAS). Ezi ziphumo zibandakanya ukukhulisa i-prostate, ukunyanzeliswa kwemveliso ye-testosterone yemvelo, ukulahlekelwa kwentloko yeenwele kunye nabanye abaninzi. Oku kuthetha ukuba i-RAD140 powder idibanisa ngokuthe ngqo kunye ne-androgenic receptors kwiisisu kunye namathambo, kodwa ayisebenzisi la ma-receptor kwezinye iindawo zomzimba. Ngenxa yoko, sithathwa ngokuba nemiphumo ye-anabolic, kodwa ngaphandle kwemiphumo emibi kunye nokunciphisa, okuvula amathuba amashishini ezinkqubo zonyango endaweni ye testosterone. Ngaloo ndlela, ngenxa yendlela yokukhetha yokwenza, i-RAD140 powder ikhuselekile nakwabasetyhini, kuba ayiyi kubangela ukuhlengahlengiswa, okanye i-clitoris yokwandisa.
Iinzuzo ze-RAD 140 Powder
Ngokusobala, njengamanye ama-SARMS, i-RAD 140 / i-testolone powder ibeka amathuba amaninzi kulabo abanezifo ezilahla izifo, i-sarcopenia (ukulahlekelwa kwemisipha emdala ubudala), kunye nokusilela kwe-androgenic. Ngokungafani ne-anabolic steroids, ezisetyenziselwa iinjongo ezifanayo, izigulane ziyakwazi ukusebenzisa ngokunjalo imiphumo emihle, ngelixa ziphepha izinto ezininzi ezingathandekiyo.
Se benzisa abanxibe impahla
Ngokusoloko, i-testolone ingenza izibonelelo ezingenakwenzeka kumdlali ngaphandle kweendleko zeempembelelo eziphambili ezibonwe ne-anabolic androgenic steroids. Ingakumbi, i-testolone iya kuphucula ngokunyanisekileyo ukunyamezela kunye nokuphucula, okuya kuqhubela phambili ekunyuseni okukhulu kwimizimba yamandla kunye namandla. Ngenxa yoko, i-RAD140 powder iya kuba yongezwa kakhulu kunoma yimuphi umjikelo, apho iya kunika zonke ezi mpawu ngaphandle kwemiphumo engaphezulu. Ngaphandle koko, ingasetyenziswa ngempumelelo kwimigangatho emide, kuba ingabangela ukunyanzeliswa.
Ziziphi iimeko zePowula ye-RAD 140?
Iinkampani ezininzi zeekhemikhali zophando kunye nabasasazwa be-SARM banikela ngeengcebiso zeelayi kwi-RAD 140 powder. Kodwa inyaniso kukuba le ncediso yintsha ngokwaneleyo ukuba izikhokelo zemiyalelo engekho. Ngokuqhelekileyo, nangona kunjalo, ezininzi iingcebiso zemiyalelo zivela kwi-0.3mg ukuya kwi-30mg ngosuku. Ngenxa yokuba abasebenzisi baya kuba nemiphumo engcono kwimilinganiselo ephezulu, abasebenzisi abaninzi bakhetha amanani kwi-20mg-30mg imihla ngemihla. Abanye abathengisi batusa umthamo ophantsi we-10mg / ngosuku ngamadoda kunye ne-5mg / ngosuku yabasetyhini.
Njengoko naliphi na isongezelelo okanye isilwanyana, kuyilungileyo efanelekileyo ukuqala kwiqondo eliphantsi ukwenzela ukuba uhlole kangcono ukunyamezela kwakho kwi-testolone. Emva koko, unokunyusa ngokuthe ngcembe umthamo xa kufuneka. Ukutyunjwa kwamanani akudingekile. Oku kungenxa yokuba isigxina-ubomi se-RAD 140 powder ibonakala phakathi kwe-12 kunye nee-18 iiyure.
Iimjikelezo ezininzi zeSARM ziqhutyelwa kwiiveki ze-12, kodwa abanye abasebenzisi bakhetha ukujikeleza kweeveki ezisibhozo. Kubafundi bomzimba abangasetyenzisanga ii-SARM ngaphambili okanye abangathanda ukukhokelwa ngokuthe xaxa ekumiseni umjikelo, kunokuba luncedo ukubonisana nomqeqeshi okanye umntu onolwazi osebenzise i-RAD 140 powder ngaphambili. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ufumane i-dosing yakho ngokusekelwe kuphando kunye nenye ityala kunye nephutha.
Kuze ngokwenene uthathe isongezelelo, le nxalenye yenkqubo ichanekileyo. Amakhemikhali ophando ahlala athengiswa kwiibhotile ze-dropper, kwaye ngenxa yokuba awanakulungi ukunambitha umdla, abaninzi bahendelwa ukuba baxube kunye nejusi. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuwayeka ngqo emlonyeni wakho. Oku kungenxa yokuba, xa udibanisa i-testolone eglasini, inamathela kumacala. Noko ke, ungayigxotha ngejusi okanye into efanayo.
Imiphumo engaphantsi kwe-RAD140 Powder
Kuphi Ukuthenga Rad 140 Powder?
Enye yeenzuzo ezikhangayo kwiRAD 140 yinto yokuba ithengwa ngayo kwi-intanethi, kwaye ithengwe ngokusemthethweni. Kukho ubuninzi beenkampani zamakhemikhali zophando ezenza i-testolone. Kodwa ngenxa yokuba aba bathengisi basuke bengabhalwanga, kubaluleke kakhulu ukwenza uphando lwakho ngaphambi kwexesha. Abakhiqizi abancinci abancinci banganciphisa okanye bangaphantsi. Yingakho ukhetha umthengisi we-Rad 140 onokuthenjelwa yinto efanelekileyo. Le yindlela efanelekileyo yokuncedisa ukuqinisekisa ukuba uhlawula ntoni ngokubhekiselele kumgangatho kunye nemilinganiselo.
Senzile uphando kwi-Intanethi kwaye sifumanise ukuba inkampani ye-AAS ibe yindawo ehloniphekileyo kunye neyona nto ifanelekileyo yokuthenga i-Rad 140 powder.Kubani abaninzi abantu bakhetha ukuthenga i-Rad 140 kwi-AAS, isizathu sokuba:
tags: athenge i-RAD140 powder, RAD140 powder, i powder RAD140
Kutheni sithenga i-LGD-4033 / VK5211 / Ligandrol powder kwi-AASraw? Thenga i-Potolone powder for building body: iziphumo ze-RAD140 kufuneka wazi!